अष्ट्रेलियाको मोनोटोनस जीवनमा खेलले थेरापीको काम गर्छ : रोशन पौडेल,क्रिकेटर - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २३ मंसिर २०७३, बिहीबार १०:३२ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलियाको मेलबर्नका दर्शकहरुका लागि रोशन पौडेल अपरिचित नाम होइन । किनभने उनी यहाँको समुदाय क्रिकेट खेलका प्रतिभाशाली खेलाडी हुन् । द हिमालयन क्लबसँग आवद्ध पौडेल आफ्नो खेलप्रतिको मोह र लगावलाई यहाँको व्यस्त जीवनशैलीले पनि अवरोध गर्न नसकेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ उनै खेलाडी पौडेलसँग स्पोर्टस् टल्कका लागि हिमालयन कङ्गारुले गरेको छोटो कुराकानी :
मेरो पुख्र्यौली घर काभ्रेपलाञ्चोक हो । तर सानै उमेरदेखि काठमाडौंमै बसें र त्यही हुर्कें । म सन् २०१३ मा अष्ट्रेलिया आएको हूँ । २०१६ मा मैले मेरो पढाइ सकाएँ । अहिले यहाँको पीआरका लागि लागिरहेको छु ।
खेल क्षेत्रमा तपाई रुची कहिलेदेखि बढ्यो ?
मलाई धेरै खेल मन पर्छ । सानैदेखि खेल्न,दौडिन मन पराउँथें । स्कूलमा हुँदा क्रिकेट,बास्केटबल,पिङ जस्ता खेलहरु खुब खेल्थें । तर क्रिकेट भनेपछि म सबकुरा विर्सन्थें ।
कति वर्षको हुँदा क्रिकेट खेल्न थाल्नुभयो ?
शायद म ३ कक्षामा पढ्दा होला हाम्रो घर छेउमा गार्मेन्ट थियो । त्यहाँका दाइहरुले काठको ब्याट बनाएर क्रिकेट खेल्नुहुन्थ्यो । मैले पनि उहाँहरुसँगै त्यही बेलादेखि खेल्न थालेको ।
कुनै अविस्मरणीय यादहरु छन् ?
बाल्यकालमा क्रिकेटसँग जोडिएका धेरै यादहरु अझै अविस्मरणीय छन् । कहिलेकहिं त विहान ४–५ बजे नै उठेर टुँडिखेलमा पुगेर पिच रिजर्भ गर्न पुग्थ्यौं । अनि दिनभर खेलेर साँझ परेपछि मात्र घर फर्कन्थ्यौं । त्यतिखेर दिमागमा क्रिकेट मात्र हुन्थ्यो । पढाइ बाहेकको सबै समय क्रिकेटमै खर्च हुन्थ्यो ।
परिवारबाट कतिको सपोर्ट छ ?
मेरो विवाह यही २०१६ को मार्चमा भएको हो । विवाहपछि समय निकाल्न झनै गाह्रो हुँदो रहेछ । काम,पढाइ अनि खेल यी सबकुरालाई सँगसँगै अघि बढाउन गाह्रै हुन्छ । तर मेरी जीवनसंगी शिक्षा पाठकले मलाई साथ दिइरहिन् । मलाई खेल्न प्रेरणा दिइरहन्छिन् । मेरो सपोर्टको लागि भ्याएसम्म ग्राउन्डमै पुग्छिन् ।
टेलिभिजनमा स्पोर्टस् च्यानल हेर्न टिभीको रिमोट खोसाखोस भएको छ ?
रिमोट खोसाखोस त किन नहुनु ? नेपालमा हुँदा दिदीहरुसँग हुन्थ्यो,अहिले यहाँ आएर पनि श्रीमतिसँग कहिलेकाहीं हुन्छ । तर उनी पनि मसँगै क्रिकेट हेर्न मन पराउँछिन् ।
खेल जीवनलाई लिएर कुनै सपना देख्नुभएको छ ?
सपना किन नदेख्नु ? म र मसँग क्रिकेट खेल्ने भिक्टोरियामा विभिन्न क्लबहरुसँग आवद्द सबै खेलाडीहरु साझा सपना देख्छौं । तर सपना मात्र देखेर हुन्न । त्यही अनुसार आफूले पनि सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । अष्ट्रेलियाको व्यस्त जीवनशैलीका वावजुद काम,पढाइ र खेल क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजान सक्नु नै ठूलो उपलब्धी हो । जहाँ खेले पनि र जुन लेभलमा खेले पनि खेलाडीमा प्यासन हुनुपर्छ । ममा पनि त्यही प्यासन छ । म फिल्डमा छिर्ने वित्तिकै रमाउँछु,छुट्टै आनन्द लाग्छ मनमा । यदि राम्रो समय दिएर त्यही अनुसारको व्यायाम र कोच पाए अष्ट्रेलियामा रहेका हामी नेपाली खेलाडीहरु पनि धेरै माथि पुग्न सक्छौं ।
तपाईलाई मनपर्ने टिम र खेलाडी ?
मलाई अहिलेको समयमा मनपरेको टिम इन्डिया र साउथ अफ्रिका हो । खेलाडीमा चाहिं विराट कोहली मन पर्छ ।
मान्छेको जीवनमा खेल किन आवश्यक छ ?
खेल र व्यायामको मान्छेको जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसले हामीलाई सधैं फिट राख्छ । स्टामीना पनि राम्रो हुन्छ । अझ अष्ट्रेलियाको व्यस्त र मोनोटोनस जीवनमा यसले थेरापीको काम गर्छ ।
अष्ट्रेलियाको व्यस्त जीवनशैलीको वावजुद कसरी समय निकालिरहनुभएको छ ?
समय निकाल्न गाह्रो हुन्छ । तर आफूलाई इच्छा भएको क्षेत्रका लागि जसरी पनि समय निकालिन्छ । अहिले मेरो कलेज छैन । सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म काम गर्छु । अनि सप्ताहन्तमा खेल्छु ।
अष्ट्रेलियामा कुन क्लबमा आवद्द हुनुहुन्छ ?
म यहाँको द हिमालयन क्लबबाट खेल्छु । हिमालयन क्लब नर्थ मेट्रो क्रिकेट एशोसियसनसँग पनि आवद्द छ । त्यसैले प्रत्येक शनिवार खेल हुन्छ ।
त्यो टिमको कप्तानी म आफैं सम्हाल्छु । गत ३ वर्षदेखि ग्रेड डि खेल्दै आइरहेका छौं । २ वर्षसम्म खासै राम्रो प्रगति गर्न नसकिए पनि यो वर्षदेखि हामीले उल्लेख्य प्रगति गरेका छौं । अहिले हामी दोस्रो नम्बरमा छौं । हाम्रो टिममा निकै डेडिकेटेड र ट्यालेन्टेड खेलाडीहरु छन् ।
हामीले लगातर २ वर्षदेखि इन्टरस्टेट क्रिकेटको उपाधि जित्दै आइरहेका छौं । भिक्टोरियामा खेलाडीको संख्या कम छ तर दक्षतामा भने निकै अगाडि छौं ।
Previousतत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्न एमालेको माग
Nextलोडसेडिङ घटाउने योजनामा अर्थ मन्त्रालयको असहमति
मनाङले जित्यो उपाधी
१५ माघ २०७३, शनिबार १७:१८
झापा गोल्डकप जित्दै मनाङको उपाधि ह्याट्रिक
२४ माघ २०७३, सोमबार १३:५६
फिफा वरियतामा नेपाली फुटबलको झिनो सुधार
३० भाद्र २०७३, बिहीबार १४:३४